Bit By Bit - မေးမေးခွန်းတွေကို - 3.3.3 ကုန်ကျစရိတ်
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်မခေတ္တစာအုပ်-အရှည်ကုသမှု၏ဘာသာရပ်ဖြစ်သောသူ့ဟာသူစုစုပေါင်းစစ်တမ်းအမှားမူဘောင်, ပြန်လည်သုံးသပ်င့် (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) ။ ကုန်ကျစရိတ်: ဤမူဘောင်ပြည့်စုံပေမဲ့, ကယေဘုယျအားဖြင့်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်လျစ်လျူရှုဖို့သုတေသီများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကုန်ကျစရိတ်-ထားတဲ့အချိန်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုဖြင့်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်ခဲအတိအလင်းပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသီများဆွေးနွေးပိုက်ဆံ-ပေမဲ့, အဲဒါကိုလျစ်လျူရှုမဖြစ်သင့်ကြောင်းအမှန်တကယ်သတ်သည်။ တကယ်တော့ကုန်ကျစရိတ်စစ်တမ်းသုတေသနတစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်အခြေခံဖြစ်ပါသည် (Groves 2004) : ကသုတေသီတွေကလူပေါင်းတစ်နမူနာထက်တစ်တစ်ခုလုံးကိုလူဦးရေအင်တာဗျူးအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝကုန်ကျစရိတ်လျစ်လျူရှုနေချိန်တွင်အမှားအသေးအဖွဲမှတစ်ဦးက Single-စိတ်ဆည်းကပ်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ပေ။
အမှားလျှော့ချနှင့်အတူတစ်ဦးစွဲ၏ကန့်သတ်မှုဖြစ်သူ Scott Keeter နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏မြေမှတ်တိုင်စီမံကိန်းကြောင့်ရုပ်ပြနေကြသည် (2000) တယ်လီဖုန်းစစ်တမ်းများအတွက် nonresponse လျှော့ချအပေါ်စျေးကြီးလယ်ပြင်စစ်ဆင်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပေါ်မှာ။ Keeter နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်နှစ်ခုတစ်ပြိုင်နက်လေ့လာမှုများ, "တိကျခိုင်မာစွာ" စုဆောင်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသုံးပြီး "စံ" စုဆောင်းမှုလုပျထုံးလုပျနညျးမြားနှငျ့တစျခုကိုအသုံးပြုပြီးတဦးတည်းပြေးလေ၏။ နှစ်ခုလေ့လာမှုများအကြားခြားနားချက်ဖြေဆိုသူဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သူတို့ကိုအားပေးအားမြှောက်သို့သှားသောအားထုတ်မှု၏ပမာဏဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ, "တိကျခိုင်မာစွာ" စုဆောင်းမှုနှင့်အတူလေ့လာမှုမှာသုတေသီပိုပြီးမကြာခဏနှင့်အချိန်တစ်ပိုရှည်ကာလကျော်နမူနာအိမ်ထောင်စုခေါ်သင်တန်းသားများကိုစပိုင်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ငြင်းဆန်လျှင်အပိုပြန်ခေါ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဤရွေ့ကားအပိုအားထုတ်မှု nonresponse တစ်နိမ့်မှုနှုန်းထုတ်လုပ်ရန်တကယ်တော့လုပ်ခဲ့တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့သိသိသာသာကုန်ကျစရိတ်မှဆက်ပြောသည်။ "တိကျခိုင်မာစွာ" လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသုံးပြီးလေ့လာမှုနှစ်ကြိမ်အဖြစ်စျေးကြီးကြီးနှင့်ရှစ်ကြိမ်နှုန်းနှေးကွေးပါသည်။ နှင့်အညီ, အဆုံး၌, နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တူညီခန့်မှန်းချက်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤစီမံကိန်းအဖြစ်အလားတူတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူနောက်ဆက်တွဲပွား (Keeter et al. 2006) , စဉျးစားမိရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြသင့်ပါတယ်: ငါတို့သည်နှစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စစ်တမ်းများသို့မဟုတ်ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တမ်းနှင့်အတူချွတ်ပိုကောင်းရှိပါသလဲ အဘယ်အရာကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စစ်တမ်းများသို့မဟုတ်ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တမ်းကို 10 ကော? အဘယ်အရာကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စစ်တမ်းများသို့မဟုတ်ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တမ်းကို 100 ကော? တစ်ချိန်ချိန်, ကုန်ကျစရိတ်အားသာချက်များကိုအရည်အသွေးကိုအကြောင်းကိုမရေ, nonspecific စိုးရိမ်ပူပန်မှုများထင်ရှားသောရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်မအခန်း၏ဤအရာကြွင်းသမျှထဲမှာပြသပါလိမ့်မယ်သကဲ့သို့, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအဆိုပါအခွင့်အလမ်းအများအပြားသိသာနိမ့်အမှားရှိသည်ခန့်မှန်းအောင်အကြောင်းကိုမရှိကြပေ။ အဲဒီအစားဤအခွင့်အလမ်းများကိုကွဲပြားခြားနားသောပမာဏခန့်မှန်းအကြောင်းကိုပင်ဖြစ်နိုင်သည်ပိုမိုမြင့်မားအမှားများနှင့်အတူခန့်မှန်းပိုမြန်ခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာအောင်အကြောင်းကိုဖြစ်ကြသည်။ အရည်အသွေးသည်အခြားရှုထောင့်များ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအမှားအသေးအဖွဲနှင့်အတူ Single-စိတ်စွဲအပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုသူကိုသုတေသီများစိတ်လှုပ်ရှားစရာအခွင့်အလမ်းများပေါ်ထွက်လက်လွတ်သွားနေကြသည်။ စစ်တမ်းများပေါင်းစပ်ပြီးအဘို့အကိုယ်စားပြုမှုအသစ်ချဉ်းကပ်မှု (ပုဒ်မ 3.4), measurement အသစ်ချဉ်းကပ်မှု (ပုဒ်မ 3.5) နှင့်အသစ်သောမဟာဗျူဟာ: စုစုပေါင်းစစ်တမ်းအမှားမူဘောင်အကြောင်းကိုဒီနောက်ခံပေးထားသောကျနော်တို့ယခုစစ်တမ်းသုတေသန၏တတိယခေတ်သုံးခုအဓိကဒေသများသို့လှည့်ပါလိမ့်မယ် ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရင်းမြစ် (အပိုင်း 3.6) နှင့်အတူ။